YiNtaka... YiNqwelo-moya... Yiteksi yomoya yaseSeoul entsha!
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseMzantsi Korea » YiNtaka… YiNqwelo-moya… Yiteksi yomoya yaseSeoul entsha!
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • iindaba • abantu • Iindaba zaseMzantsi Korea • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
YiNtaka… YiNqwelo-moya… Yiteksi yomoya yaseSeoul entsha!
Kuyathenjwa ukuba inkqubo entsha yeeteksi zomoya iya kuphelisa ingxinano yezendlela kwikomkhulu laseMzantsi Korea kwaye iqalise ukusebenza ngo-2025.
Inqwelomoya entsha yeteksi yomoya yathatha inqwelomoya yovavanyo kwisikhululo seenqwelomoya saseSeoul eGimpo.
Inqwelomoya yovavanyo lukawonkewonke yenqwelomoya icwangciselwe kwiveki ezayo kwisikhululo seenqwelomoya saseSeoul's Incheon.
UMzantsi Korea kulo nyaka uphelileyo ubhengeze izicwangciso zokuphuhlisa iziseko zophuhliso ze-UAM, utyalo-mali malunga ne-65 yezigidi zeedola kubuchwephesha.
Inqwelomoya ene-rotor eyi-18 eyilwe yinkampani yaseJamani IVolocopter wenze inqwelomoya yovavanyo olufutshane kwisikhululo seenqwelomoya saseSeoul eGimpo ngoLwesine.
Inqwelo-moya yovavanyo lwabasebenzi benqwelo-moya engaqhelekanga eyenzelwe ukusebenza njengeteksi yomoya kwixesha elizayo elingekude iqhutywe kunye nomqhubi wenqwelo-moya eyingenisa emoyeni ayibhabhise emva naphambili ngaphakathi kwipaseji yomoya echongiweyo.
Kuyathenjwa ukuba inkqubo entsha yeeteksi zomoya iza kuphelisa ingxinano yezendlela emaznstie ekoreaIsixeko esilikomkhulu kwaye izakusebenza ngo-2025.
Inqwelomoya yasezidolophini (i-UAM) igubungele i-3km, ihleli phantsi kobude beemitha ezingama-50 kwaye ifikelela kwisantya se-45kph ngexesha lovavanyo lwemizuzu emihlanu.
Eyona njongo yolu vavanyo yayikukubona ukuba iyunithi isebenza kakuhle kangakanani na kwindawo yesikhululo seenqwelomoya, apho ulawulo lweenqwelomoya luyimfuneko ekusebenzeni ngokukhuselekileyo.
Imodeli yezihlalo ezimbini, esebenzisa iimoto zombane ukunika amandla i-18 i-fixed-pitch propellers efana ne-quadcopter drone, yenza i-flight yayo yokuqala kwi-2013. Uvavanyo lwenqwelo-moya loluntu lucwangciselwe ukuba lwenzeke ngeveki ezayo e-Incheon, inxalenye esentshonalanga. ye Seoul Indawo eyiNkunzi.
emaznstie ekorea kulo nyaka uphelileyo ubhengeze izicwangciso zokuphuhlisa isiseko se-UAM kazwelonke, utyalo-mali malunga ne-65 yezigidi zeedola kubuchwephesha. Urhulumente unethemba lokuqhuba iiteksi zomoya ngokurhweba ukusuka ngo-2025, ukukhwela abakhweli abayedwa phakathi kweSikhululo seenqwelomoya sase-Incheon kunye nombindi weSeoul ngexabiso elimalunga ne-93 yeedola ngohambo - ngaphezulu kweteksi yesiqhelo. Ixabiso lexabiso lilindeleke ukuba lilahle ngaphezu kwesihlanu kwi-2035, xa i-UAMs yamkelwa ngokukhawuleza kwaye iqhutywe ngeenkqubo ezizenzekelayo kunokuba abantu.
kunjalo, IVolocopter izakujongana nokhuphiswano oluvela kwi-UAM yasekhaya ebizwa ngokuba yi-OPPAV. Umphuhlisi wayo, iKorea Aerospace Research Institute (KARI), ulungiselela ukuqhuba uhambo olupheleleyo lwe-prototype test flight kunyaka ozayo.